Bar dadyoowga ka diiwaangashan xafiiska shaqada waa ajaaniib - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Pi Frisk / SvD / TT
Bar dadyoowga ka diiwaangashan xafiiska shaqada waa ajaaniib
La daabacay tisdag 12 april 2016 kl 17.22
War-bixin saaka laga soo saaray hayadda xafiiska shaqada ayaa lagu sheegey in tira-koob bishii maarso ee sannadkan lagu sameeyey dadyoowga ka diiwaan-gashan hayadda shaqada ee shaqa-la’aanta ku sugan ey bar yihiin ajaaniib ka soo jeeda waddammada ka baxsan Yurub. Halka dhanka kale ey hoos u dhaceyaan dadyoowga xafiiska ka diiwaan-gashan ee asal ahaan dalka ka soo jeeda.
– Xaqiiqdii ajaaniibtu waa ey ka fog yihiin suuqa shaqada, waxaan ula jeedaa iney ka tacliin hooseeyaan, isla-markaana ey u baahan yihiin aqoon-kororsi dheeri ah. Waana mid muddo qaadaneeysa, sida uu sheegay Mats Wadman, ahna madaxa saadaalinta ee hayadda xafiiska shaqada.
Bishii maarso ee ina dhaaftay ayaa tira-koobkii ay hayadda xafiiska shaqadu soo saartay ay ku caddaatay in bar dadyoowga ka diiwaan-gashan hayadda ey ka soo jeedaan dalka dibaddiisa tiro gaarsiisan 188 000 ee ka mid ah guud ahaan tirada ka diiwaan gashan hayadda xafiiska shaqada ee 372 000, middaana waxaa ugu wacan in maalin walba ey yimaadaan oo ey xafiiska iska diiwaan-geliyaan ajaaniib dalka ku cusub oo shaq-doon ah.
– Suuqa shaqada ee dalka Sweden ayaa ah mid aad u adag, hase yeeshee ey faa’iidada ugu ballaaran ka heleen dadyoowga asal ahaan ka soo jeeda Sweden. Halka dhanka kale ey aad u kordheen caqabadaha in ajaaniibta la howl-geliyo. Waxay u egtahay inuu dhacay is-bedel, sida uu sheegay Mats Wadman.
Si haddaba taageero loogu fidiyo dadyoowga ajaaniibta ee dalka dibaddiisa ka soo jeeda loo baahan yahay in qiimeeyn lagu sameeyo tacliintooda iyo nidaamka barasho ee luuqadda iswiidhishka, sida uu hadalka u dhigay Mats Wadman, ahna madaxa laanta saadaalinta ee hayadda suuqa shaqada.
Xafiiskani wuxuu isku xiraa shaqa-doonka iyo shaqa-bixiyaha
Ajaaniibta iyo shaqa la'aanta